I-China Chain Link Fence yenzela uMenzi kunye noMthengisi wesicelo | Pro olubiyele
Ukuveliswa kocingo oludibanisa ikhonkco kubizwa ngokuba kukuluka. Iingcingo zihamba nkqo kwaye zigobele kwipatheni yegzagg ukuze ii "zig" zamagwegwe ngocingo ngoko nangoko kwelinye icala kwaye nganye "zag" ngocingo ngoko nangoko. Oku kwenza uphawu lwedayimani ecingweni kwikhonkco lokudibanisa. PRO.FENCE uzenzele uthango-link ikhonkco ashushu nkxu kwalenza yinkqubo yokongeza zokwaleka zinc ukutyabeka phezu intsimbi ukunciphisa umhlwa kunye umhlwa. Sikwabonelela ngocingo oludibeneyo lwe-vinyl-coating link olwenziwe ngocingo olwenziweyo ngombala we-vinyl. Uninzi lweentambo zekhonkco lokudibanisa zihlala zihlala zifakwe kukhonkrithi. Kodwa i-PRO.FENCE inokubonelela ngemfumba yomhlaba endaweni yokunciphisa umkhondo wekhabhoni kwaye ugcine ixesha lofakelo. Ukongeza, i-PRO.FENCE ineqela le-R & D elingabanakho ukuyila imveliso elungele ukuthengisa ukuze ikwazi ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubiya ucingo.
Ikhonkco lokudibanisa ikhonkco yeyona ndlela ithandwayo, ibhetyebhetye kwaye yamkelwe ngokubanzi yinkqubo yokubiyelwa kwezicelo zokuhlala, ezorhwebo nezamashishini. Ungayifumana xa ujikeleze izakhiwo zezindlu, iinkundla zentenetya, iinkundla zebhasikithi, isikolo, indawo yokuthenga, iipaki, njl.njl.
I-PRO.FENCE ibonelela ngocingo lokudibanisa kwi-galvanized okanye ipowder egcweleyo kunye nakwiindawo eziphakamileyo kunye neenkcukacha.
Umnatha: 60 × 60mm
Ubungakanani bePaneli: H1200 / 1500/1800 / 2000mm，30m / 50m kuluhlu
Iposi: φ48 × 1.5
Isiseko: Ikhonkrithi yonyawo / isiqwenga semfumba
Kugqityiwe: kwalenza / Powder camera (Brown, Mnyama, Luhlaza, Mhlophe, Beige)
Ikhonkco lokudibanisa ikhonkco lolona cingo luqoqosho kakhulu xa kuthelekiswa nolunye ucingo kuba ixabiso eliphantsi lofakelo. Ukuyilwa kwayo kukwenza ukuba kube lula ukufakwa kunye nokulungiswa ukuba inxenye yocingo iyonakala. Ucingo lwekhonkco lokudibanisa luyakuba lolukhetho olufanelekileyo ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luxinzelelo lwakho olukhulu.
Ikhonkco lekhonkco lekhonkco linokuba kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, iirhaji ezahlukeneyo kunye nayo yonke imibala. Nokuba ulwakhiwo lunokuhlengahlengiswa kwisicelo esahlukileyo.
Isakhiwo sokuluka ngocingo oluphezulu lwentsimbi olunokuthi ngokuchasene nezothuso zangaphandle kakuhle, kunye nokushiyeka kwepateni ye-zig kunika indlela yokupasa yomoya okanye ikhephu ukuthintela ucingo kumonakalo ohambelana nemozulu.
Olu cingo luqinileyo lwentsimbi lunokudala umqobo okhuselekileyo kwipropathi yakho. Olu cingo lwekhonkco lwetyathanga lunokudityaniswa lube kubude obungama-20ft ukuba luyafuneka kwaye kongezwe ucingo oluhlabayo phezulu ukukhusela ukunyuka.
Into NO.: PRO-08 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo Itroli esindayo yomthwalo onzima wokuhambisa izinto kunye nokugcinwa, 3 macala S
Okulandelayo: I-BRC yeWelded Mesh Fence yoBugcisa bokwakha